ज्याकेट / भेस्ट्स → विज्ञापन कपडा • पेशेवर पी एन्ड एम कम्प्यूटर कढ़ाई
विज्ञापन ज्याकेट र निहित पतन र जाडो मौसमको लागि निश्चित रूपले राम्रो विकल्प हो। हामीले प्रदान गरेको कपडा एकदम राम्रो देखिन्छ, तर व्यावहारिक उपयोगिता तत्वहरू पनि छन्। यो हावा र वर्षा जस्ता बाह्य कारकहरू विरूद्ध सुरक्षाको लागि प्रभावकारी छ।
रेनप्रूफ र विन्डप्रूफ ज्याकेटहरू र निहित
कटौती धेरै ध्यान दिन योग्य छ वर्षाव र वायुप्रूफ, गाह्रो बाह्य मौसम अवस्थाहरूमा तिनीहरूको प्रयोगको कारण। उत्पादन गर्न ज्याकेट र निहित अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ ताकि उत्पादले धेरै वर्षसम्म राम्रो गुणमा सेवा गर्दछ जबकि यसको गुणहरू राख्दछ।
आराम र सुरक्षाको लागि शैलीहरूको विविधता
हाम्रोमा पसल तिमीले पाउनेछौ ज्याकेट र kamizelki महिला, पुरुष, बच्चाहरू र युनिसेक्सका लागि बिभिन्न शैलीहरूमा। आकार र र ofको एक विस्तृत श्रृंखलाले तपाईंलाई उत्पादनलाई तपाईंको आवश्यकताहरू समायोजन गर्न र कम्पनी वा क्लबको रंगको साथ रंगहरूको रूपमा पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ।
अर्डर गर्ने क्रममा यो विशेष उपयोगी विकल्प हो विज्ञापन लुगाविशेष गरी यदि हामी उनलाई छान्छौं निजीकरण कार्यान्वयन द्वारा व्यक्तिगत प्रिन्ट.
तिनीहरू एक महत्त्वपूर्ण समूह गठन गर्छन् परावर्तक निहित, क्षेत्र र सडकमा सुरक्षा सुधार। तिनीहरू अँध्यारो पछि यात्रा गर्नका लागि उत्तम छन्, साथै बढि बादल दिनमा।
प्रस्तावले बच्चाको लागि पहेंलो, परावर्तनशील बनियान पनि समावेश गर्दछ, जसले निश्चित रूपमा सडकमा वा सडक छेउमा घर र स्कूल बीचको बाटोमा बच्चाको दृश्यता र सुरक्षामा सुधार गर्दछ। दुबै वयस्क र बच्चाहरूको लागि परावर्तक निहितले सुधार दृश्यतालाई धन्यवाद गम्भीर दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी पनि प्रस्ताव परावर्तनशील ज्याकेट आस्तीन र हुडलाई छुट्याउने सम्भावनाको साथ, जुन विशेष रूपमा स transition्क्रमण कालहरूमा उपयोगी हुन्छ र जहाँ जहाँ पनि वातावरण र तापक्रममा परिवर्तनको आवश्यक पर्दछ। ज्याकेट सँग एक छुट्टन योग्य भित्री ऊन को जैकेट छ, प्रमाणित M एम परावर्तक पट्टि हुन्छ, EN ISO मापदण्ड पूरा गर्दछ। उत्पादन निजीकृत गर्न सकिन्छ, तर असंख्य सीम र जेबका कारण मार्किंग क्षेत्र सीमित छ, ब्रान्डिंगमा पछाडि पहुँच छ।
सौन्दर्य रूपमा प्रिन्टहरू
गहना (कम्प्युटर कढ़ाई वा स्क्रिन प्रिन्टि।) ज्याकेट र निहितहरूमा सबै विवरणहरू ध्यान दिएर बनेको छ।
उच्च गुणमा ध्यान दिनु भनेको यसको अर्थ यो हो कि तपाईले खरिद गर्नुहुने लुगा कम्पनीको पेशेवर प्रतिनिधि तत्व हुनेछ। हाम्रो कम्पनीको आफ्नै मेसिन पार्क छ, जसले हामीलाई प्रत्येक चरणमा सजावट प्रक्रिया ठीकसँग नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, र यसरी उत्पादन त्रुटिहरूको स्थितिमा तुरून्त प्रतिक्रिया दिनको लागि।
उत्पाद प्रस्ताव विस्तार भएपछि र ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार, हामीले विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर सजावटहरू बनाउने निर्णय गर्यौं, सबैभन्दा पहिले कम्प्युटर कढ़ाईतर पनि स्क्रिन प्रिन्टि।, उच्च बनाउने i थर्मल स्थानान्तरण.
हामी तपाईंलाई छिटो र निःशुल्क मूल्यांकन गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
न्यानो काम ज्याकेटमहिला काम निहितपुरुषहरूको काम निहितपुरुषहरूको इन्सुलेटेड काम निहितइन्सुलेटेड काम निहितपुरुषहरूको इन्सुलेटेड काम निहितचिंतनशील काम निहितकाम निहितकाम निहित एल्ग्रोगर्मी को काम निहितइन्सुलेटेड काम निहितचिंतनशील काम निहितकाम निहित ओएलएक्सप्रिन्टको साथ काम निहितजाडो काम निहितपुरुषको काम ज्याकेटपुरुषहरूको जाडो काम गर्ने ज्याकेटहरूइन्सुलेटेड काम ज्याकेटहरूचिंतनशील काम ज्याकेटहरूपरावर्तक कार्य ज्याकेट Allegroपुरुषको वर्षा जैकेटकाम रेनकोटकाम ज्याकेटAllegro काम ज्याकेटहरूसेतो काम को जैकेटमहिला काम ज्याकेटअधिक आकार काम ज्याकेटहरूपुरुषको काम ज्याकेटजाडो काम जाकेटगैर-ज्वलनशील काम ज्याकेटहरूइन्सुलेटेड काम ज्याकेटहरूचिंतनशील काम ज्याकेटहरूपरावर्तनशील जाडो कार्य जैकेटहरूकाम ज्याकेट ओएलएक्सइंद्रधनुष्य काम ज्याकेटथर्मोएक्टिभ कार्य ज्याकेटहरूवसन्त काम ज्याकेटप्रिन्टको साथ काम ज्याकेटहरूपरावर्तकको साथ काम ज्याकेटहरूजाडो काम जाकेटAllegro जाडो काम जैकेटमहिला जाडो काम जैकेटपरावर्तनशील जाडो कार्य जैकेटहरूपरावर्तनशील जाडो काम जैकेट Allegroवर्षाप्रिय जाडो काम जैकेटजाडो काम जैकेट पसलपुरुषको जाडो जैकेटचिंतनशील काम जाडो जैकेटजाडो जैकेट कामचिंतनशील जाडो जैकेटशिथिल ज्याकेटब्रान्डेड वर्क ज्याकेटमस्कट काम ज्याकेटहरूनर्वे काम ज्याकेटहरूचिंतनशील काम ज्याकेटहरूकाम निहितइन्सुलेटेड काम ज्याकेटहरूजाडो जैकेट कामकाम कपडा निहितजाडो काम जाकेट
5 /5( 13 वोट )